Waxaan rabaa in aan ku wada sheekaysto barta Instagram ma jirtaa doorashadan? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaan rabaa inaan kula sheekaysto barta Instagram Ma jirtaa ikhtiyaarkan?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 373
Instagram had iyo jeer hal-abuurnimo iyada oo loo daneynayo ka-faa'iideystayaasha waxay isku dhafan tahay ikhtiyaarka sheekaysiga ee codsigeeda, u isticmaal si fudud, Shaqadan cusub ee 'Instagram' waxay ka dhigeysaa mid soo jiidasho leh dadka isticmaala, maadaama barnaamijkan uu soo hagaagayo mar kasta oo uu la qabsado baahiyaha wada xiriirka ee dadka isticmaala ganacsiga iyo ganacsiga.
Sida loo isticmaalo wada hadalka Instagram:
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad qorto arjiga Instagram-ka taleefankaaga gacanta
Gali magacaaga iyo isgarad-lambarkaaga sirta ah la xidhiidha koontadaada 'Instagram'.
Markaad kujirto astaantaada, dooro sheyga farriimaha, taasi waa in la yiraahdo, diyaaradda waraaqda. Waxaad ka heli kartaa qaybta midig ee sare ee shaashadda barnaamijkaaga.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in booska farriimaha gaarka loo leeyahay iyo wada sheekaysiga, gebi ahaanba waa ammaan, isgaarsiinta aad ku dirto arimahan waxaa arki doona kaliya kaqeybgalayaasha wadahadalka.
Hel oo dooro qofka aad rabto inaad la xiriirto ama la sheekeysto.
Hawlaha ay ku sheekaysato barta 'Instagram' ayaa ku siinaysa:
U dirista iyo helitaanka farriimaha qoraalka toos ula xiriir qofka kale.
Codsigan, marka lagu daro farriimaha qoraalka fudud, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dirto oo aad hesho faylasha multimediaMarka waxaad fursad u heli doontaa inaad si gaar ah dadka kale ula wadaagto fiidiyowyada iyo sawirrada.
Faylasha warbaahinta badan kuma koobna kuwa aad ku keydisay mobilkaaga, sidoo kale waxaad ka qaadi kartaa sawirro toos ah oo dabcan dooro mid ka mid ah daabacadaha ka muuqda darbigaaga, beddelkan ugu dambeeya wuxuu leeyahay xaddidaadda daawashada, taas oo ah, in labada dhinac ee wada-hadalka ay u arkaan waxyaabaha ay tahay inay raacaan koontada haddii ay gaar tahay ama ay ka soo dirto waxyaabaha a koontada dadweynaha.
Waad awoodaa dir GifsKuwaani waxaa laga dooran karaa xulashooyinka uu dalabku bixiyo, kuwaas oo kaladuwan oo kordhiya maalin kasta.
ka farriimaha maqalka waa mid ka mid ah faa'iidooyinka wada-hadalkan, waxaad u adeegsaneysaa adiga oo riixaya astaanta makarafoonka, waxaad duubeysaa codka oo sii deyneysaa, si otomaatig ah ayaa loo soo diri doonaa.
Wicitaanada fiidiyowga waa faa iidada kale ee arjiga, sidaa darteed haddii waxa aad rabto inaad lahadasho ay waxoogaa ka qarsoodi yar yihiin, oo aadan rabin inuu ku sii jiro wadahadalka ama taleefankaaga gacanta, tani waa ikhtiyaar isgaarsiineed oo sax ah.
Faahfaahinta kale ee mudan in la ogaado:
Haddii ay tahay rabitaankaaga waad tirtiri kartaa nooc kasta oo fariin ah in aad ku dirto adoo adeegsanaya wada sheekaysiga oo kaliya fariimaha qoraalka ah, waxa kale oo ku jira multimedia, maqal iyo muuqaal.
Waxaad fursad u heli doontaa inaad u habee sheekaysiga sida aad u kala jeceshahay, waxaad yeelan doontaa naqshado kala duwan oo aad kula qabsan karto munaasabad kasta ama qof walba.
Ugu dambeyntii waxaan u imid "Qaab-dhismeedka" Kani waa sheeko xiiso badan oo Instagram ah, qaabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad yeelato wada hadal gaar ah oo lagu ilaalin doono sidan.
Waa maxay tan macnaheedu? Waqtigaan aad ku shaqeyneyso sidan farriimaha aad dirto waxay ka baabi'i doonaan sheekada oo dhinacyada wadahadalka midkoodna marin u heli maayo, si la mid ah haddii qofka kale uu qaado shaashadda wadahadalka, dalabku wuu ogeysiinayaa adiga.
1 Sida loo isticmaalo wada hadalka Instagram:
2 Hawlaha ay ku sheekaysato barta 'Instagram' ayaa ku siinaysa:
3 Faahfaahinta kale ee mudan in la ogaado:
Sidee loo diiwaangeliyaa qoraallada barta Instagram?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo soo dejiyo fiidiyowyada 'Twitch'?